Adriana | | NOTICIAS, လျှပ်စစ်ယာဉ်များ
El လီသီယမ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိဤဒြပ်စင်ကိုမသိရှိရသေးသော်လည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိသောသဘာဝသယံဇာတဖြစ်လာသည်။
လီသီယမ်သည်စီးပွားရေးအဆင့်တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအစားထိုးလိမ့်မည် ဆီ လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အချို့စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်။ ၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးအရည်အသွေးသည်အပူချိန်မြင့်မားပြီးပမာဏများစွာစုဆောင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည် စွမ်းအား.
အဓိက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလီသီယမ်၏သိုက်များ ၎င်းတို့ကိုချီလီ၊ တရုတ်၊ သြစတြေးလျ၊ အာဂျင်တီးနားနှင့်ဘိုလီးဗီးယားရှိသဲကန္တာရများနှင့်ခြောက်သွေ့သောဒေသများတွင်တွေ့ရသည်။
လီသီယမ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် ဘက်ထရီနှင့်ဘက်ထရီ လက်တော့ပ်တွေနဲ့အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေအတွက်။
၎င်းသည်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် လီသီယမ်ဘက်ထရီများ ကိုသုံးပါ လျှပ်စစ်နှင့်စပ်သောကားများ။ ၎င်းသည်ကြွေထည်မြေထည်နှင့်ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဒီဓာတ်သတ္တုအသစ်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့လီသီယမ်၏ ၈၅% သည်တောင်အမေရိကနိုင်ငံများဖြစ်သော Bolivia, Argentina နှင့်ချီလီနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လာမည့်နှစ်များ၌ဤနိုင်ငံများ၏သိုက်များမှဤဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများကိုနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ အချို့သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ထိုသို့မလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းအားလုံးကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့တွင်ဖြစ်နိုင်သမျှအန္တရာယ်ကင်းမည် ပတ်ဝန်းကျင်။ အဖြစ်ကောင်းစွာသိုက်၏မှန်ကန်သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်သူတို့အသုံးပြုမှုဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ပါတယ်။
၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းပေးတော်မူ၏ Eco-friendly ကားများ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်လီသီယမ်သည် ၀ ယ်လိုအားဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး၎င်းသည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ထိရောက်စွာနှင့်အနည်းဆုံးညစ်ညမ်းစေသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီပါသောယာဉ်များသည်မစွမ်းနိုင်ပါ CO2 ထုတ်လွှတ်သည် ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတကယ်ဂေဟစနစ်စေသည်။
လီသီယမ်သည် ၂၁ ရာစု၏အဓိကဇတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားလောင်စာများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ယေဘုယျ » NOTICIAS » ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကမ္ဘာ့ဓာတ်သတ္တုသိုက်များ